: Indimy nitsangana tamin’ny maty i Mama Esther
Nandalo teto Mahajanga ny herinandro lasa teo, nitondra ny hafatra nampitondrain’ny Tompo azy ho an’ny vahoakan’i Mahajanga, i Mama Esther. 17 février 2014
Raha ny voalazany dia tamin’ny fotoana nahafaty azy indimy nisesy io no nahazoany ny hafatra tian’Andriamanitra homena ny mpanompony.
« Ny fampibebahana ny olona rehetra fa tsy mibebabebaka fotsiny, ny famerenanan ny olona amin’ny fitiavana voalohany, fanambarana fa : ‘izay mino sy atao Batisa no hovonjena’, ny fampahafanatarana fa ny mpivady tsy mifankatia dia mampalahelo ny Tompo Jesosy. Tsy manana anjara toerana any an-danitra ny mpanompo sampy sy ny mpijangajanga. Mila
mibeba ny mpitondra fiangonana fa tsy manam-pitiavana sady tsy manao ny asany tanteraka ka maro ny olona very any amin’ny helo. Madagasikara no lahimatoan’ny Firenena amin’ny fifohazam-panahy. Tsy maintsy mitety tany maro izy hanambara izany rehetra izany ary
hanambara amin’izao tontolo izao ny zavatra naseho azy tany an-danitra ». Ireo no hafatra nambarany tamin’ny vahoaka sy ny tonga namaly ny fanasana nataony teny amin’ny Lapan’ny tanàna teto Mahajanga, ny harivan’ny sabotsy 15 febroary lasa teo, izay nahavory olona maro
Antso hatramin’ny fahakeliny
Raha ny voalaza dia mbola zaza i Mama Esther no efa nantsoin’ny Tompo hampita ny hafany saingy tsy tsapany mihitsy io raha tsy efa lehibe nanan-tokantrano izy. Efa nandà mafy tsy hanao izany asa izany anefa izy satria tsy nandia fianarana lavitra, fa teo amin’ny kilasy faha-7
izy no nijanona.
Tamin’ny alalan’ny feo miantso ny anarany sy nofy no niasan’io fanahin’Andriamanitra io taminy. Ny nofiny rehetra anefa dia tanteraka avokoa. Lasa afaka maminany ihany koa i Mama Esther satria rehefa misy olona ho faty ao amin’ny fianakaviana sy ny mpiray tanàna dia fantany mialoha izany. Isan’ny tena nampatahotra azy fatratra izay toe-javatra rehetra izany tamin’ny fiainan’ny fahazazany. Matetika izy no mahatsiaro ho tsy
tompon’ny tenany sy miara-miaina amin’ny hery tsy fantatra, raha ny fitantarany.
Ny taona 1990 izy no nampakarin’ny pastora Ravasa Imanoela ho vady. Na izany aza tsy mbola nety nitsahatra ny feo niantso sy maniraka azy io saingy tsy noheveriny velively. Ankatoky ny Krismasy taona 1982 izy no maty voalohany raha nifoha maraina hikarakara sakafon’ny ankizy tao an-trano. Efa nanan-janaka roa izy mivady tamin’izany fotoana izany. Noentina tany amin’ny hopitaly izy ary efa niara-nanaiky ny mpitsabo fa maty tokoa i Mama Esther. Niverina anefa ny ainy ny ampitson’io, tamin’ny 1 ora maraina.
Ny febroary 2006 indray izy no niatrika ny fahafatesana faharoa, tao amin’ny hopitaly
Sakalalina. Ny febroary 2007 ny fahafatesana fahatelo tany amin’ny hopitaly Ihosy. Tamin’ny 3 avrily 2007 ny fahafatesana fahefatra, tao an-katoky ny Herinandro masinan’ny Paska. tao amin’ny kilasimandry Loterana ao Ihosy no nitrangan’izany. Ny fahafatesana fahadimy niseho taminy kosa dia vao tamin’ny 30 novambra 2013 lasa teo.
Tsy noentina hopitaly intsony
Raha ny fijoroana vavolombelona nataony dia tao amin’ny fahafatesana fahefatra no nitantarany ny diany tany an-danitra sy naharesy lahatra azy hampita ny hafatry ny Tompo. Tamin’io fotoana io dia tsy noentina tany amin’ny hopitaly intsony izy satria efa nafarany tamin’ny pastora vadiny fa raha toa ka miverina indray io fahafatesana io dia avela amin’izao ao an-trano izy ka vavaka no natao mandra-piverin’ny ainy indray. Io no tena nahitany zavatra maro naseho azy sy tsy namelana azy tsy hanao lokom-pitafiana hafa ankoatra ny fotsy. Nanomboka teo ny hafatra nampitondrain’ny Tompo azy satria nanaiky ny iraka nampanaovina azy ihany izy hatreo no nankaty. Betsaka ireo pastora sy mpiandry ary loholona tao amin’ny fiangonana nisy azy no nanatrika io tranga io ka samy resy lahatra
avokoa. Ny hira tao amin’ny FFPM 449 no noirainy tamin’ny fiverenanan’ny ainy “Njay reko Tompo ô, njay re ny feonao.......” Ary nandray ny lamba maha mpiandry azy izy ka namoaka demonia tamin’ny hery tsy takatry saina. Naniraka ny olona hifamela heloka sy hibebaka izy, indrindra fa ny samy mpanompon’Andriamanitra izay tsy mifanakatia. Ny teny tao amin’ny Asan’ny Apôstôly 17 : 30,31 sy ny Isaia 60:1,2 no nambarany tamin’ireo rehetra nanatrika io fotoana io. Taorian’izay dia nitanatra ny diany tany an-danitra izy fa nasehon’ny Tompo azy ny helo na ny farihy mirehitra afo, izay tena loza sy mampangovitra tokoa raha ny fitantarany azy. Naseho azy koa ny paradisa.